Iindaba - umoya werubber Fender esikalini ngo-2021
IdathaIntelo kutshanje ikhuphe ingxelo ebanzi ebizwa ngokuba yi "pneumatic Rubber Fender Market", egxile ekunikezeleni isishwankathelo esipheleleyo sentengiso. Ingxelo ibonelela ngolwazi lwamva nje kuyo yonke imiba ephambili yentengiso kwaye kulindeleke ukuba ibe nefuthe elibonakalayo kwintengiso nakwindlela yokusebenza ngexesha lesimo sezulu. Umba ophambili kukuba ingxelo ilungiselelwe ngendlela eya kuthi ihlangane neemfuno zabathengi. Le ngxelo sisikhokelo esipheleleyo sabathengi ukuba benze izigqibo ezichanekileyo ngokusekwe kwizicwangciso zotyalo-mali kwishishini nakwizicwangciso.
Ingxelo ibandakanya uphononongo olubanzi lweedatha ezikhoyo kwimarike yabathengisi beHlabathi yeHlabathi ngexesha lembali ka-2015-2019, kunye novavanyo olunamandla lwentsebenzo yeemarike kunye nezinto eziqhubekayo kunyaka osisiseko we-2020. Le yingxelo enzulu yohlalutyo ngexesha lokuqikelela kwe-2021-2028. Ingxelo ibonelela ngolwazi malunga nokuqonda okubalulekileyo malunga nokukhula kwamashishini kunye nophuhliso, abaqhubi, imiceli mngeni kunye nezithintelo.
Ingxelo ibonelela ngohlalutyo olubalulekileyo lwentengiso ye-port fender ngokubhekisele kubhubhane we-COVID-19 kunye neziphumo ezibi kwimveliso yeemveliso nakwintengiso yehlabathi. Iqhube uphando olubanzi malunga nefuthe lobhubhane we-COVID-19 kwintengiso yehlabathi kwaye ichaze ukuba iyakuchaphazela njani imisebenzi yeshishini kwishishini kungekudala. Ngamafutshane, ingxelo yeDathaIntelo ibonelela ngolwazi olucwangcisiweyo malunga nokutshintsha kweemeko zentengiso kunye nokuqhubeka kokuthandwa kokuhanjiswa kwehlabathi kunye nokusetyenziswa kokuhamba. Ngamafutshane, le ngxelo ibonelela ngolwazi olunzulu malunga nolwakhiwo lwemarike iyonke yabantu abakhusela izibuko kwaye ivavanya utshintsho olunokwenzeka kwimeko yangoku kunye nekamva lokhuphiswano lwentengiso yabathengisi bezibuko.
Ingxelo yentengiso ichaza ngokweenkcukacha amacandelo emarike aphambili kubandakanya iintlobo zemveliso, usetyenziso kunye nemimandla ngokuchaza ukwaziswa kwemveliso entsha, ubuchwepheshe obutsha kunye nezinye izinto eziphambili. Ivavanya ubungakanani bemakethi evelayo, intsebenzo kunye nomda wamacandelo ahlukeneyo entengiso yeemarike zabathengisi beHlabathi. Ingxelo ibonelela ngohlalutyo olucokisekileyo lwabadlali abaphambili kwimarike kwaye ichaza ezona zinto ziphambili bazenzileyo, eziye zanceda ukutshintsha imeko yentengiso yezi nkampani. Ngamafutshane, iqhube uvavanyo oluthile lwezicwangciso eziphambili kunye nezicwangciso abazenzileyo. Ezi zicwangciso kunye nezicwangciso zibandakanya ukudityaniswa kunye nokufunyanwa, ubuhlakani, intsebenziswano, kunye nokwandiswa kweeyunithi zemveliso phesheya ngabadlali abaphambili.
Ngokwendlela yokusebenza, ingxelo ixhomekeke kwimithombo yamabanga aphantsi nasesekondari kwaye yenza isixhobo esinamandla sophando. Imithombo ephambili ibandakanya udliwanondlebe nabaphathi beenkampani kunye nabameli, kunye nokundwendwela amaxwebhu asemthethweni, iiwebhusayithi, kunye nokukhutshwa kweendaba ezivela kwiinkampani ezinxulumene nemarike yabathengisi beZibuko. Ikwaquka amagqabantshintshi kunye neengcebiso ezivela kwiingcali zentengiso, ngakumbi abameli abavela koorhulumente nakwimibutho yoluntu nakwimibutho engeyiyo ekarhulumente. Kwangelo xesha, ingxelo iqikelela kwaye iqinisekisa umda opheleleyo wentengiso yeHarb Fenders ngokusebenzisa iindlela zokuya ezantsi nasezantsi, ichaza uqikelelo lobungakanani bexabiso lemarike (i-USD) kunye nevolumu yokuthengiselana (K MT).
Ingxelo yeDathaIntelo yaziwa ngokuchaneka kwedatha kunye nesitayile esichanekileyo, kwaye ixhomekeke kulwazi lokwenyani nakwimithombo yedatha. Ingxelo inika iseti yemiboniso echanekileyo, iitheyibhile kunye neegrafu ukunceda ukucacisa ngokucacileyo inkqubela phambili yemveliso kunye nokusebenza kwayo kwintengiso kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngoncedo lwale ngxelo ichanekileyo, kulula ukuqonda amandla okukhula, ukukhula kwengeniso, uluhlu lweemveliso kunye namaxabiso ahambelana nemarike yabathengisi bezibuko.
Le ngxelo igubungela ukusebenza kweenkcukacha zabanye abadlali abaphambili kunye nokwaphuka, ukusetyenziswa kunye nohlalutyo lommandla lwabadlali abaphambili kolu shishino. Ukongeza, ingxelo ikwajonga imigaqo-nkqubo eyahlukeneyo karhulumente kwimimandla eyahlukeneyo, enceda ukubonisa amathuba aphambili kunye nemiceli mngeni yentengiso kwingingqi nganye.
Ingxelo igubungela uhlalutyo olubanzi lwezinto ezivelayo kwimarike yefender fender kwimimandla emihlanu, kubandakanya iNyakatho Melika, iLatin America, iYurophu, iAsia Pacific, kunye noMbindi Mpuma kunye neAfrika. Ingxelo ibonelela ngohlalutyo olunzulu lwentsebenzo yentengiso yale mimandla ngokugxila kumazwe aphambili kule mimandla. Ingxelo inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi kwaye inikezwe kwingxelo eyahlukileyo kwindawo ethile.
Inqanawa yomoya, Irabha yeFender, Iibhola zomoya zasemanzini, China Irabha Fender, Ibhloko edibeneyo, Iinqanawa zeTec,